RASMI: Macallin Roberto Martinez oo heshiis cusub qalinka ugu duugay xulka qaranka Belgium – Gool FM
RASMI: Macallin Roberto Martinez oo heshiis cusub qalinka ugu duugay xulka qaranka Belgium
Haaruun May 20, 2020
(Brussels) 20 Maajo 2020. Tababare Roberto Martinez ayaa heshiis cusub qalinka ku duugay, kaasoo uu kula sii joogi doono isagoo macallin ah xulka qaranka Belgium illaa sanadka 2022-ka, sida uu ku dhowaaqay xiriirka the Royal Belgian Football Federation (KBVB).
Macallin Martinez ayaa xilka tababarennimo ee xulka Belgium loo magacaabay sanadkii 2016-kii, waxaana heshiiskiiskan cusub uu xulka ku sii wadi doonaa tartanka Koobka Adduunka ee lagu qabanayo dalka Qatar sanadka 2022-ka.
Tababarahan reer Spain ayaa jiilka dahabiga ah ee Belgium ku hoggaamiyey afar dhammaadka Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Ruushka 2018, waxaana garaacay xulka koobka ku guuleystay ee France ka hor inta aysan ku garaacin England kaalinta saddexaad ee play-off-ka si ay u xaqiijistaan heerkeedii ugu fiicnaa abid ee Koobka Adduunka.
Qandaraaskiisii hore ee Martinez ayaa lagu waday inuu dhaco kaddib tartanka Euro 2020, kaasoo dib loogu dhigay sanad faafaha Coronavirus awgii.
Belgium ayaa halka ugu sarreysa kaga jira kala sarreynta xulalka Adduunka ee FIFA, waxaana ay doonayaa inay xaqiijiyaan hanashada tartammada ku soo aaddan.
Ku dhawaaqista waxaa raacay muuqaal uu soo duubay kabtanka xulka iyo xiddiga Real Madrid ee Eden Hazard oo isagoo ciyaarayay ciyaar gacameedka FIFA soo hal qabsanaya saaxiibkiisa ay xulka ka wada tirsan yihiin ee Romelu Lukaku.
“Tababaraha ayaa saxeexay! Tababaraha ayaa saxeexay, ole, ole, ole. ‘Hi Romelu, miyaad aragtay inuu tababaruhu saxeexay? Haa, miyaanu ahayn war weyn! Okay, bye,” Hazard ayaa sidaas ku sheegay muuqaal kooban oo uu soo duubay.
🎮 This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA… 😉 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN
Macallinka xulka Belgium ee Martinez ayaa lagu wadaa inuu martigaliyo shir jaraa’id goor dambe maanta oo Arbaco ah, halkaas oo uu kaga hadli doono qandaraaskiisa cusub.
Booliska dalka Masar oo gacanta ku dhigay Rag doonayey inay Dukaan ku dhacaan Maaskaro u eg wajiga Mohamed Salah